Budata Skype maka Windows
Free Budata maka Windows (74.50 MB)
Gịnị Bụ Skype, A Na-akwụ Ya ?gwọ?
Skype bụ otu nime ndị kasị eji free video nkata na izi ozi ngwa nụwa nile site na kọmputa na ama ọrụ. Site na ngwanrọ nke na-enye gị ohere ịde ederede, kwuo okwu na nkata vidiyo na-akwụghị ụgwọ site na ,ntanetị, ị nwere ohere ịkpọ ụlọ na ekwentị mkpanaaka na ọnụ ọnụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nzukọ ndị ọrụ na kọmpụta ha, smartphones na mbadamba ekele maka nkwado ya na-akwado ọtụtụ, Skype na-eji teknụzụ P2P maka ndị ọrụ iji kwurịta okwu. Ihe omume ahụ, nke nwere atụmatụ ndị dị elu dị ka nnukwu ọdịyo na vidiyo dị elu (ọ nwere ike ịdị iche dabere na ọsọ njikọ ịntanetị gị), akụkọ mkparịta ụka, oku ọgbakọ, nnyefe faịlụ echekwara, na-enye ụdị ngwaọrụ niile ndị ọrụ nwere ike ịchọ. Nagbanyeghi nkatọ a na-akatọ maka iji okporo ụzọ na ịntanetị eme ihe nke ọma yana enweghị nchekwa, Skype bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu nime ozi izizi na ngwa nkata vidiyo na ahịa ugbu a
Olee otu esi abanye na Skype?
Mgbe ibudata ma wụnye Skype na kọmputa gị, ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ onye ọrụ mgbe ị na-agba ọsọ mmemme ahụ nke mbụ, ị ga-ebu ụzọ mepụta akaụntụ njirimara gị. Nezie, ọ bụrụ ninwere akaụntụ Microsoft noge a, ị nwere ohere iji akaụntụ Microsoft gị banye na Skype. Mgbe ịmechara usoro ndị dị mkpa, ị ga-enwe ohere iji nkwukọrịta ozi na ndị ọrụ Skype niile gburugburu ụwa na-akwụ ụgwọ nefu.
Ọ bụrụ na ị nweela akaụntụ Skype ma ọ bụ Microsoft, soro usoro ndị a iji banye na Skype:
Mepee Skype wee pịa aha Skype, adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị.
Tinye aha Skype, adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị gị wee họrọ Banye.
Tinye paswọọdụ gị wee họrọ akụ ka ị gaa nihu. A ga-emeghe oge Skype gị. Mgbe ị banyere, Skype na-echeta ozi ịbanye gị mgbe ị mechiri Skype ma ọ bụ họrọ ịpụ ma cheta ntọala akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ Skype ma ọ bụ Microsoft, soro usoro ndị a iji banye na Skype:
Gaa na Skype.com na ihe nchọgharị weebụ gị ma ọ bụ budata Skype site na ịpị bọtịnụ nbudata Skype dị nelu.
Malite Skype wee pịa Mepụta akaụntụ ọhụrụ.
Soro ụzọ egosiri na ịmepụta akaụntụ ọhụrụ maka Skype.
Etu esi eji Skype
Site nenyemaka nke Skype, ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ niile dị ka oku olu, ịkpọkọta ọgbakọ mkparịta ụka na ndị enyi gị, nkata vidiyo dị elu, nnyefe faịlụ echekwara, ịnwere ike ịkpọtụrụ ndị enyi gị na ezinụlọ gị site na iwepụ ebe dị anya.
Nwekwara ike ịkwadebe ndepụta ndị enyi gị, mepụta otu maka izipu ọtụtụ mmadụ na ndị enyi gị, jiri atụmatụ nkekọrịta ihuenyo iji chee ma ọ bụ nyere ndị dị iche iche aka na kọmpụta gị, chọgharịa akwụkwọ ozi gara aga gị maka atụmatụ izi ozi / mkparịta ụka, mee ndezi na ozi izipula ma ọ bụ jiri nkwupụta dị iche iche You nwere ike izipu ọkacha mmasị gị na ndị enyi gị noge izipu ozi gị.
Ihu njirimara onye ọrụ Skype dị kensinammuo ma dịkwa mfe iji. Nụzọ dị otú a, kọmputa na ndị ọrụ mkpanaka nke ọkwa niile nwere ike iji Skype rụọ ọrụ nenweghị nsogbu. Njirimara dịka profaịlụ onye ọrụ, ọkwa ọkwa, kọntaktị / ndepụta enyi, mkparịta ụka na nso nso a na mmemme izipu oge gboo dị nakụkụ aka ekpe nke njirimara onye ọrụ. Notu oge ahụ, nchekwa folda Skype, ntọala otu, igbe ọchụchọ na bọtịnụ ọchụchọ akwụ ụgwọ na-ewetara ndị ọrụ na windo isi nke mmemme ahụ. Nakụkụ aka nri nke usoro ihe omume interface, ọdịnaya ị họrọ na-egosipụta na mkparịta ụka windo i mere na ndị ị họrọ na kọntaktị na ndepụta.
Ọ bụrụ na ị nwere njikọ ịntanetị ọsọ ọsọ, enwere m ike ịsị na ị gaghị ahụ ogo olu na oku vidiyo na Skype na mmemme ozi ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ na - enye gị ezigbo ụda na akara onyonyo karịa ọrụ VoIP, ọ bụrụ na ị nwere njikọ ịntanetị nwayọ nwayọ, ịnwere ike ihu ntụgharị na igbu oge na ụda.
E wezụga na, ọbụna ma ọ bụrụ na i nwere a ọjọọ njikọ connectionntanetị, ị nwere ike iri uru nke Skype si ozi feature enweghị nsogbu ọ bụla. The oku na-aga àgwà button na usoro ihe omume ga-enye gị ihe ọmụma zuru ezu banyere video oku na-aga ma ọ bụ olu mkparịta ụka ị na-eme noge ahụ.
Ibudata ma Wụnye Skype
Ọ bụrụ na ị na-achọ ozi dị irè ma dịkwa mfe iji, oku olu na usoro ọkpụkpọ vidiyo, enwere m ike ịsị na ị gaghị ahụta karịa Skype nahịa. Ọ bụrụ na anyị tụlee na Skype, nke Microsoft zụrụ na 2011, mepụtara na nyiwe niile wee dochie ngwa ngwa ngwa ngwa Microsoft nke Windows Live Messenger, ma ọ bụ MSN dị ka amaara ya netiti ndị ọrụ Turkey, ị ga-amata ọzọ etu m siri kwenye na Ekwuru m.
Ọkpụkpọ ọdịyo na HD vidiyo: Ahụmịhe doro anya ọdịyo na vidiyo HD maka otu-na-otu ma ọ bụ otu na-akpọ na nzaghachi oku.
Izi ozi Smart: Zaghachi ozi niile ozugbo na mmeghachi omume ọchị ma ọ bụ jiri akara @ kpọtụrụ aha iji dọta uche mmadụ.
Ikesa ihuenyo: Kesaa ihe ngosi, foto ma ọ bụ ihe ọ bụla na ihuenyo gị site na ikesa ihuenyo.
Kpọọ ndekọ ndekọ na nkọwapụta Live: Dekọọ oku Skype ka ị weghara oge pụrụ iche, detuo mkpebi dị mkpa, ma jiri nkọwa dị ndụ iji gụọ ihe a na-ekwu.
Kpọọ ekwentị: Gakwuru ndị enyi na-anọghị nịntanetị site nịkpọ ekwentị na ekwentị ndị nwere ọnụego ịkpọ oku mba ofesi. Kpọọ ekwentị na ekwentị mkpanaaka gburugburu ụwa na ọnụego dị ala site na iji Skype akwụmụgwọ.
Mkparịta ụka nkeonwe: Skype na-edobe mkparịta ụka gị nke ọma na nzuzo na nzuzo nke ụlọ ọrụ njedebe njedebe na-ezo.
Nzukọ otu-pịa: Hazie nzukọ, gbaa ajụjụ ọnụ na-enweghị nbudata ngwa Skype ma banye.
Zipu SMS: Zipu ozi ederede ozugbo na Skype. Chọpụta ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji jikọọ site na SMS sitere na ebe ọ bụla, oge ọ bụla site na iji Skype.
Ekekọrịta ọnọdụ: Chọta ibe gị na ụbọchị mbụ ma ọ bụ gwa ndị enyi gị banyere ebe ntụrụndụ.
Mmetụta mmetụta: Mgbe ị gbanye atụmatụ a, ndabere gị ga-adị ntakịrị. You nwere ike dochie ndabere gị na onyonyo ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Izipu faịlụ: can nwere ike mfe ịkekọrịta foto, vidiyo na faịlụ ndị ọzọ ruo 300MB nibu site na ịdọrọ na idobe ha nime windo mkparịta ụka gị.
Onye ntụgharị okwu Skype: Rite uru site na nsụgharị oge nke oku olu, oku vidiyo na ozi ozugbo.
Ebugharị oku: Nyefee oku Skype gị na ekwentị ọ bụla iji nọrọ na ya mgbe ị na-abanyeghị na Skype ma ọ bụ enweghị ike ịza oku.
NJIMA oku: Ọ bụrụ n ịkpọ ekwentị ma ọ bụ akara ekwentị sitere na Skype, akara ekwentị gị ma ọ bụ akara Skype ga-egosipụta. (Chọrọ mmezi.)
Skype Iji Gaa: Kpọọ nọmba mba ụwa na ekwentị ọ bụla na ọnụego dị ọnụ na Skype Iji Gaa.
Ekwentị, desktọọpụ, mbadamba, weebụ, Alexa, Xbox, otu Skype maka ngwaọrụ gị niile! Wụnye Skype ugbu a iji soro ndị ị hụrụ nanya sitere nakụkụ ụwa niile na-akpọtụrụ!
Etu esi melite Skype?
Imelite Skype dị mkpa ka ị nwee ike ịnweta njirimara kachasị ọhụrụ. Skype na-eme ndozi oge niile iji melite ogo, melite ntụkwasị obi, ma melite nchekwa. Ọzọkwa, mgbe a kwụsịrị nsụgharị ochie nke Skype, ọ bụrụ na ị gaa nihu iji otu nime ụdị ochie ndị a, enwere ike ịpụ na Skype na akpaghị aka ma ị gaghị enwe ike ịbanye ọzọ ruo mgbe ị ga-ewelite na nke kachasị ọhụrụ. Mgbe ị na-emelite ngwa Skype, ịnwere ike ịnweta akụkọ nkata gị na otu afọ gara aga. Gaghị enwe ike ịnweta gị chat akụkọ ihe mere eme site na mbụ ụbọchị mgbe update. Skype kacha ọhụrụ bụ nefu ibudata ma wụnye!
Pịa bọtịnụ nbudata Skype nke dị nelu iji budata ụdị Skype kachasị ọhụrụ wee banye. Ọ bụrụ na ị na-eji Skype maka Windows 10, ị nwere ike ịlele maka mmelite site na Storelọ Ahịa Microsoft. Iji melite ngwa Skype na Windows 7 na 8, soro usoro ndị a:
Banye na Skype.
Họrọ Lelee maka mmelite. Ọ bụrụ nịhụghị menu Enyemaka na Skype, pịa ALT iji gosipụta ogwe ngwaọrụ.
HD mma video conferencing atụmatụ
Ohere ịgwa ụwa dum okwu ọnụ ala
Nha faịlụ: 74.50 MB
Mmepụta: Skype Limited